घरमा दबाब कम गर्न कत्तिको द्रुत छ? धेरै तरिकाहरू
हाम्रो समयको सबैभन्दा सामान्य रोगहरू दबाब बढेको छ। यो केवल पुरानो मा मात्र होइन, जवान मानिसहरू पनि यस बीमारीबाट ग्रस्त छन्। बढ्दो दबाब धेरै अप्रिय, पीडादायी छ र स्ट्रोकको नेतृत्व गर्न सक्छ। तर त्यहाँ सधै औषधि संग उपचार गर्ने अवसर छैन, र तिनीहरू सबैले उपयुक्त छन्, धेरै contraindications and साइड इफेक्टहरू छन्। यसकारण, कसरी चाँडै घरमा दबाब कम गर्नको प्रश्न, धेरै चासोहरू।
निस्सन्देह, हामी संकट परिस्थितिको बारेमा कुरा गरिरहँदैनौं, जब प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण छ। तर ती व्यक्ति जसको रक्तचाप प्रायः बढ्दै जान्छ र अधिक हुँदैन, तपाईलाई चाँडै घरमा दबाब कम गर्न जान्न आवश्यक छ। यदि तपाईं अस्वस्थ, सिरदर्द र टिनिटस महसुस गर्नुहुन्छ भने, आराम गर्न प्रयास गर्नुहोस्। आखिर, दबाइ अक्सर तनाव र तनावबाट उठ्छ। न्यानो स्नान लिनुहोस् वा बसोबास गर्नुहोस्, सुखद शान्त संगीत सुन्नुहोस्।
गर्दन, गर्दन र माथिल्लो सीने क्षेत्रको माछा राम्रोसँग मद्दत गर्दछ। तपाईं कलर क्षेत्रमा सुई आवेदकलाई पनि संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तकिए संग थिच्नुहोस्। यो 15 मिनेटको लागि बसोबास गर्नुहोस्, र तपाईंले राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ। शान्त र आराम गर्न, ध्यान वा सास फेर्न प्रयास गर्नुहोस्।
अन्य तरिकामा घरमा कत्तिको दबाब कम हुन्छ? तपाईं लसुन पालु स्नान वा एक विपरीत बौछार लिन सक्नुहुन्छ।
दबाव कम गर्न र उचित पोषण संग। फ्याट, फ्राइड र नमस्कार फूड, अल्कोहल, चकलेट र कन्फेक्शनरीरीबाट इनकार गर्न आवश्यक छ। कफी र कालो चियाको सट्टा, यो कुकुर र स्याउको बीउ को विकार पीडा राम्रो छ। सब्जका रसहरू, विशेष गरी बीटहरू, गोभी र मूलीहरू पनि उपयोगी छन्। र भाँडाको लोच बढाउन, हरी चिया रक्सी पिउन धेरै पटक, सेब, जामुन वर्नर्नम र क्रेनबेरीहरू खाने। उपयोगी पकाएको आलु, जैतून र पातलो तेल।
खाद्य उच्च रक्तचापमा मुख्यतया सब्जियां, फलफूल र डेयरी उत्पादनहरू हुन्छन्। मासु र पशु वसाको खपत सीमित गर्नुहोस्, यसबाट तपाईं रगतमा कोलेस्ट्रल स्तर कम र दबाव सामान्यतया। यस्ता खानाहरू खानुपर्ने सम्भव प्रयास गर्नुहोस्: लसुन, प्याज, बीट, अजमेर, अदरक र काली मिर्च। हाइपरटेन्सनको लागि धेरै नुस्खाले शहद समावेश गर्दछ। तपाईं यसलाई जस्तै यो खान सक्छ, यसलाई चायमा थप्नुहोस् वा जामुन र तरकारीको रस संग मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
औषधि कम गर्ने ड्रगहरू, तपाईं फार्मेसीमा पाउन सक्नुहुन्छ। वाल्रिआन, हज्जर्न वा मातृभाषाको राम्रो ट्रेक्रेट मद्दत गर्दछ। यसलाई मिश्रण गर्न सिफारिस गरिएको छ, सानो "वालेकोर्डिना" थप्नुहोस् र यो मिश्रणले तनाव र एक चाउचाउमा टाउको दुखाइ लिनुहोस्। बिरुवा पनि किन्नुहोस् कि रक्तचाप कम गर्नुहोस्। तिनीहरूमध्ये तपाईं चायको सट्टामा पिउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, वाल्लरियन, मातृभाषा, टकसाल र क्यालेन्डुला। अरु दिन औषधिको रूपमा 2-3 चोटि औषधिको रूपमा लिइन्छ: सुत्न सुत्ने, गोठालोको थलो वा चौंको माटोको माटो।
जो लोग दबाव को सामान्यतया गर्न चाहते हो नियमित रूप देखि खेल मा संलग्न हुनु पर्छ, भरी नै चलें। यो विशेष व्यायामशाला अध्ययन गर्न वा योग व्यायाम गर्न राम्रो हुनेछ। यो समय र निद्रामा बिदा जान आवश्यक छ, र चिन्ता र तनावबाट जोगिन आवश्यक छ। अब तपाईलाई थाहा छ कसरी घरमा द्रुत गतिलाई कम गर्न। स्वस्थ हुनुहोस्।
मानिसको Bergenia को औषधीय गुण
Anise तेल - मेरो सहायक
चिकित्सा र निवारक मालिश कमर
वाकवाकी लागि लोक उपचार। वाकवाकी उन्मुक्ति कसरी
मित्सुबिशी लांसर 10: वर्णन, विशेषताहरु। "मित्सुबिशी लांसर-10": मालिकको समीक्षा
Gennady Malakhov: पुस्तकहरू, स्थानान्तरण, गैर-परम्परागत उपचार को शरीर को विधि र शुद्धीकरण
सुन खानी। सुन निकासी को विधिहरू। सुन खानी म्यानुअल
बेलारुसी आर्थिक विश्वविद्यालय: वर्णन, विशेषता र समीक्षा